Ethernet Shandura1 Vagadziri & Vatengesi | China Ethernet Chinja1 Fekitori
Ethernet chinja 1
24 Port L2 / L3 Yakachengetedzwa Ethernet Chinja ZJ8300-28G-4TF
24 Port L2 Management Ethernet Chinja, inopa 350Gbps switching kugona, kwakanyanya kuita; Kuve ne96Mpps yekufambisira mberi kuita, L2 / L3 waya - kukurumidza kutumira. Iyo modular dhizaini inopa 24 chiteshi 10/100 / 1000M fiber Ethernet RJ45, uye 4 zviteshi 10G SFP + slot, 1 Console port. Ipa yakakwana bandwidth yekubatanidza uye yepakati data Shanduko. Vashandisi vanogona kusarudza 10G zviteshi zvinoenderana nechinodiwa kuve neshuwa netiweki kugadzikana kushanda uye chinongedzo mutoro kuenzanisa. L2 10G Management chinja pamwe yakakwirira bandw ...
8 Port 100Mbps Ethernet kuna Fiber Chinja Model ZJ-100108-25
10 / 100M Optic Fiber Chinja ndeye 100BASE-FX Ethernet mhangura midhiya ku100Base-TX Fiber. Ipa mhinduro iri nyore uye ine hupfumi kusimudzira mhangura yakavakirwa network kune fiber optic yekuwedzera kusvika kwechiratidzo. Fiber Chinja hutachiwana chinhambwe kusvika 120KM. Plug-uye-kutamba dhizaini, nyore kuisa. Inogona kushandiswa sekumira-yega. Zvimiro • 8 Port 10 / 100M Ethernet + 1 Port Fiber switch, Imwe Mode Dual Fibre • Hafu kana yakazara duplex auto-kutaurirana • 10/100 Mbps auto-kutaurirana kwechiteshi chendarira • Auto MDI ...
4 Port 10 / 100Mbps Ethernet + 2 chiteshi Fiber Optic Chinja Model ZJ-100204-25
10 / 100M Optic Fiber Chinja ndeye 100BASE-FX Ethernet mhangura midhiya ku100Base-TX Fiber. Ipa mhinduro iri nyore uye ine hupfumi kusimudzira mhangura yakavakirwa network kune fiber optic yekuwedzera kusvika kwechiratidzo. Fiber Chinja hutachiwana chinhambwe kusvika 120KM. Plug-uye-kutamba dhizaini, nyore kuisa. Inogona kushandiswa sekumira-yega. Zvimiro • 4 Port 10 / 100M Ethernet + 2 Port Fiber switch, Imwe Mode Dual Fibre • Hafu kana yakazara duplex auto-kutaurirana • 10/100 Mbps auto-kutaurirana kwechiteshi chendarira • Auto MDI ...
4 Port 100Mbps Ethernet kuna Fiber Chinja Model ZJ-100104-25
10 / 100M Optic Fiber Chinja ndeye 100BASE-FX Ethernet mhangura midhiya ku100Base-TX Fiber. Ipa mhinduro iri nyore uye ine hupfumi kusimudzira mhangura yakavakirwa network kune fiber optic yekuwedzera kusvika kwechiratidzo. Fiber Chinja hutachiwana chinhambwe kusvika 120KM. Plug-uye-kutamba dhizaini, nyore kuisa. Inogona kushandiswa sekumira-yega. Zvimiro • 4 Port 10 / 100M Ethernet + 1 Port Fiber switch, Imwe Mode Dual Fibre • Hafu kana yakazara duplex auto-kutaurirana • 10/100 Mbps auto-kutaurirana kwechiteshi chendarira • Auto MDI ...
2 Zviteshi 10 / 100Mbps Ethernet Fiber Chinja Model ZJ-100102-25
2 Zviteshi 10 / 100Mbps Ethernet Fiber Chinja ndeye 100BASE-FX Ethernet mhangura midhiya kune 100Base-TX Fiber. Ipa mhinduro iri nyore uye ine hupfumi kusimudzira mhangura yakavakirwa network kune fiber optic yekuwedzera kusvika kwechiratidzo. Fiber Chinja hutachiwana chinhambwe kusvika 120KM. Plug-uye-kutamba dhizaini, nyore kuisa. Inogona kushandiswa sekumira-yega. Zvimiro • 2 Port 10 / 100M Ethernet + 1 Port Fiber switch, Imwe Mode Dual Fibre • Hafu kana yakazara duplex auto-kutaurirana • 10/100 Mbps auto-kutaurirana kwemhangura ...